Ka baro imtixaanka Teoriga iskuulka internetka ee Somaliska | Somaliska
Somaliska / Waxbarashada
Sidii aan ka dhawaajiyay isbuucii hore waxaan xarun waxbarasho isla markaana noqondoonta xafiiska rasmiga ah ee Somaliska.com ka furmay magaalada Fagersta ee gobolka Västmanland. Xaruntaan ayaa noqon doonta goob waxbarasho oo Soomaalida magaalada ku nool ay ku bartaan Teoriga, kombutarka iyo luuqada Swedishka.
Maadaama Somaliska laga akhristo guud ahaan wadanka ayaan sidoo kale go’aansanay in aan waxbarashada xarunta NPC u gudbino Soomaaliweynta ku firirsan daafaha Sweden. Si aan taas u suurto galino ayaan ku soo darnay bogga qeyb aan ugu magacdarnay Somaliska Online Skolan oo ah iskuul internetka ah oo lagu baran doono Teoriga iyo luuqada Swedishka. Iskuulkaan ayaad si toos ah oo muuqaal ah ugala socon kartaa casharada ka baxaya xarunta NPC, maalinkasta waxaan soo daabici doonaa casharka maalintaas oo Somali iyo Swedish ku quran isla markaana ay la socdaan su’aalo la mid ah kuwa imtixaanka ku imaanaya. Koorsada ugu horeysa ee aan bixin doono waa Teoriga.
Adiga oo gurigaaga jooga ayaad fasalada NPC si toos ah ula socon doontaa oo markii koorsada dhamaato waxaad diyaar u tahay in aad gasho imtixaanka. Faa’iidooyinka iskuulkaan ayaa waxaa ka mid ah.
Meelkasta oo aad Sweden ka joogto in aad ku soo biiri karto, waxa keliya ee aad u baahantahay waa kombutar muuqaal laga daawan karo.
Casharada aad qaadan doonto waxay la midyihiin kuwa ardada iskuulka timaada ay qaataan.
Iskuulka waxa uu leeyahay imtixaano aad ku baraagtigareyn karto oo la mid ah kuwa imtixaanka teoriga.
Haddii su’aalo aad qabto ayaad isla casharka hoostiisa ku qori kartaa adigoo uu kaaga soo jawaabaya macalinka.
Waxaa uu iskuulka leeyahay Chat aad ardada kale aqoonta isku dhaafsan kartaan
Haddii casharka ku dhaafo ayaad waqti kasta dib ugu ceshan kartaa
Koorsooyinka xarunta NPC ayaa bilaabanaya 1-Augusti, hadaba cidii dooneysa in ay ku soo biirto iskuulka Somaliska Online Skolan halkaan riix. http://www.somaliska.com/skolan
Koorsada luuqada Swedishka dib ayaan ka soo galin doonaa faahfaahinteeda.
July 11, 2011 at 08:55
ma sha alah waa arin wanagsan lakin ma lacag baa mise waa gratis taasi noo soo sheega please mahadsanid
Waa mahadsantahay Axmadeer. Sida aad dareemi karto hawsha ku baxaysa iskuulka onlineka waxay la midtahay mida ku baxaysa iskuulka caadiga ah. Waxaan isku dayaynaa ardada iskuulka timaada iyo kuwa internetka kala socda in ay isku cashar qaataan oo si isku mid ah wax u fahmaan. Sidaa darteed iskuulka waa lacag balse waa wax qofkasta awoodi karo. Macluumaadka oo dhameystiran iyo sida laysku diiwaan galiyo waxaad ka heli kartaa halkaan http://www.somaliska.com/skolan
Asc maasha-allaah waa arrin wanaagsan aad baan u daneyneynaayay waana alle mahadii marka xigtana bahda Somaliska.com waxayna noo tahay fursad weyn waxaanba ku fakiraayay sideed ku dhiibtaad imtixaanka s
Asc maasha-allaah waa arrin wanaagsan aad baan u daneyneynaayay waana alle mahadii marka xigtana bahda Somaliska.com waxayna noo tahay fursad weyn waxaanba ku fakiraayay sideed ku dhiibtaad imtixaanka shaqa walbana waxaa laguugu xirayaa sharciga baabuurta insha-allah waan ka wada faaiideysan doonaa hadii alle idmo mahadsanidiin.
masha alaah weye lakin qaali bad ka dhigteen koorsada dagdaga
kkk kayfo waan xisaabtameynaa. Haddii aad qaadato koorsada degdega ah oo 3 bilood ah waxaa kaaga baxaysa guud ahaan 1500kr. Haddii aad gasho iskuulada Swedishka oo aan Somali wax kugu bareen waxaa kaaga baxayesa lacag saaid intaas uga badan.
Sida aad la socotaan dadka qaar ayaa loo galaa imtixaanka taasi oo sharci daro ah haddii aad sameyso waxaa kaa baxaysa 8000 ilaa 10,000kr. Marka adigoo oo si sharci ah u bartay imtixaanka haddii aad ku baasto oo 1500kr keliya kaa baxdo. Yaa faaiido qaba? Haddii aadan degdegsanyn waxaad qaadan kartaa koorsada caadiga ah.
Mida kale, xarunta waa goob sharciyaysan oo canshuur laga rabo. Marka wixii aan qaadno qeyb badan oo ka mid ah waxaa qaadanaya Skatteverket.
kkkkkk jimcale waxaan ku weydina adinka ma shahadad isiinaya mise imtixanka iskulkalan u tgayaa
Marka aad dhameysato koorsada aan bixino ayaad si toos ah u galeysaa imtixaanka ay qaado hayada Trafikverket ee bixiya körkortka. Haddii aad soo baasto waa OK haddii kalena waxaad sii akhrineysaa casharada iyo su’aalaha.
Iskuul kale uma baahnid.
maanshalah wa arin aad iyo aad uwangsan bahda somaliska.com ada bay umahdasan yihiin sida ay somalida sawedn ku nol ay wax ula qabnayan
mashaa allh waa arin wanagsan aan ka fa.ideysano sxabta waad ku mahadsan tihin waxqabadkina somaliska.com
Masha Allah aad ayaad u mahadsantihiin dhamaan akhristayaasha sharafta leh. Isla maalintii kowaad dad badan ayaa isdiiwaan galiyay. Waa arin lagu farxo oo nagu dhiiri galineysa in adeeg kan ugu sareeya aan soo bandhigno, haddii alle idmo.
July 12, 2011 at 19:39
asc walaal waan idin salaamay bahada skolka walaal waxaan idinka codsanyaa inaad ii sheegtiin halka uu ku yaalo iskuulka walaal aad ayaan u xiiseeynayaa ee ii soo sheeg halka uu ku yaalo hadii kalena ii soo sheega sida ugu fudud oo aan kala socon karo internetka
Wsc, walaal iskuulka waxa uu ku yaalaa xarunta New Progress Center oo ku taala magaalada Fagersta gobolka Västmanland. Iskuulka internetka waxaan ku soo gudbineynaa casharada ka baxaya xarunta oo muuqaal ah kuna baxaya afka Soomaaliga iyo Swedishka. Maalinkasta waxaan qeybta iskuulka ku soo daabaceynaa casharada oo Soomaali oo ay la socdaan erayada muhiimka ee Swedisha ah iyo suaalo la xiriira casharka oo laga yaabo in ay imtixaanka ku yimaadaan.
Sidoo kale qeybta iskuulka internetka waxaan ku diyaarineynaa dhowr boqol oo suaalood oo swedish ah oo ardadu ay ku baraatigareyn karaan.
Wixii faahfaahin ku saabsan iskuulka iyo isdiiwaan galinta waxaad ka heleysaa halkaan http://somaliska.com/skolan/start/
asc aad iyo aad ayaad umahadsantihiin bahda somalska.com dadaalka dheeraadka ah aad u gudbineysaan reer sweden oo dhan ,lakin su,aal ayaan qabaa lacagta ma hormaris baa mise gadaal aa laga dhiibaa , iyo mideeda kale accounka lacagta lugu soo shubaayo ma swedbank aa mise nordea mahadsanidiin